“ သင်နှင့် သင့်ချစ်သူကို Five Star ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုက လက်ထပ်ပွဲကျင်းပပေးမယ်လို့ ကမ်းလှမ်းလာခဲ့ရင် ”
ချစ်သုနဲလက်ထပ်ချင်တာပေါ့။ဒါပေမဲအခုဘ၀တော့မဖြစ်နှိုင်တော့ပါဘူးသူကိုလည်းအရမ်းချစတယ်ဒီစာကိုဖတ်တဲသူငယ်ချင်းများဒီစာကိုဖတ်ပြီးကျွန်တော်တိုနှစ်ယောက်ကိုပေါးင်းနှို်င်အောင်ဆုတောင်းပေးကြပါနော်five star hotel မှာမင်္ဂလာဆောင်နိုင်အောင်ဆုတောင်းပေးကြပါနော်သူငယ်ချင်းများကိုခင်ချင်တဲအတွက်ကျွန်တော်ရဲgmail လေးပါေ၇းပေးမယ်နော်ခင်ချင်တဲလူရှိရင်ကျွန်တော်gmail ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါနော် ကျွန်တော်gmail ကlovecrazy.tzo@ ပါခင်ဗျာ။
Post By : သော်ဇင်
ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ပွဲမကျင်းပချင်ပါဘူးလို့ ငြင်းဆိုလိုက်မှာပါ ဒီ့အပြင် လက်ထပ်စာချုပ်မှာတောင် လက်မှတ် မထိုးပါဘူးလို့ ပြောပြလိုက်မှာပါ လူသားနှစ်ဦး ပေါင်းစည်းခြင်းမှာ စာချုပ်တွေ အသိအမှတ်ပြုပွဲတွေထက် ယုံကြည်နားလည်ပေးနိုင်ခြင်းတွေသာ လိုအပ်တဲ့အကြောင်း ရှင်းပြလိုက်မှာပါ
မိန်ခလေးတွေအတွက် ချစ်သူ့ရဲ့ ရင်ခွင်ဟာ Five Star Hotel ထက်တော့ ခမ်းနားမယ်ထင်တယ်နော်... ဦးနှောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့ ချစ်တဲ့သူက လွဲလို့လေ... ကျွှန်မ ဦးနှောက်နဲ့တော့ ခံစားတတ်ပါတယ်... နှလုံးသားကပိုတယ်...
Five Star Hotel mar latt htet ma pyaw sayar kg tar ma hote par bu. chit thu na yout atu nay ya tar ka pyaw sayar par.
i mar chit thu ka ma shi top ma khan sar tak thay bu
Post By : ei ton
ဆုံဆည်ူဖို့တောင်ဝေးနေတာ...... လက်ထက်ဖို့ကတော်တော်ဝေးနေတယ် အဝေးမြေမှချစ်သူအတွက် သွယ်
Post By : snowwhite31189
ကိုတို့ အတွက်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလေ ငယ်အဲဒီအတွက်တော့ ကိုတကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး
အရမ်း ၀မ်းသာတာပေါ့ ဗျာ
Post By : ထက်အောင်ကျော်..NEW.LOVE92
ကျွန်တော်မအံ့သြပါဘူး တစ်ကယ်ဆိုရင်တောင် ငြင်းမိမှာပါ လူတွေပါးစပ်ကိုကြောက်လို့ပါ အလကားရလို့ လုပ်တဲ့ကောင်ပါ သူ့ပါသူဆို ဘုန်းကြီးကျောင်းတောင်အနိုင်နိုင်ရယ်လို့ပြောကြမှာပေါ့
Post By : မင်းရဲ့မောင်
money kone mar pot ....
ဟား...ဟား.. ယုံချင်စရာကြီး။ ဘယ်သူကအဲလောက်အကုန်အကျခံပြီးဆောင်ပေးရအောင်သူတို့နဲ့ဘာတော်လို့လဲ။ဘာကျေးဇူးတွေရှိလို့လဲ။လူတွေကိုမယုံချင်တော့ပါဘူး။
Post By : ယမင်းမမပန်းကေသီကဗျာစုလဲ့မြတ်နိုးသူဇာသော်တာလမင်း။မောလိုက်တာနာမည်ကတော်တော်ရှည်တယ်နော် နာမည်ရိုက်ရတာန့သေမှာပဲ
Five Star mar min ka lar soung pay yinayan pyaw mar
Post By : yinlie
ko netato time pin kyi mae lay.
ဘယ်သူ့အကူအညီမှအလိုပဲ ကိုယ့်ဘ၀ကိုရပ်တည်နိုင်မှ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မိန်းကလေး တစ်ယောက်ကိုယူမယ် အဲ့အတွက် ဘယ်သူအကူအညီမှအလိုအပ်ပါဘူး မာနကြီးတာတော့်မဟုတ်ဘူး ကျေးဇူးအတင်မခံချင်တာ..............ကျွန်တော်က ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်ချင်တဲ့ကောင်မျိုးမို့ပါ...........။
ကျွန်တော်ကယောင်္ကျာလေးဗျ။ သူတို့ပေးမှမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့လည်းမိန်းမယူနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်မှာဆောင်ဆောင်မိန်းမက၁ယောက်ပဲရမှာပါ။ 5star မှာpresent ၁ယောက်ပေးလားဟင်....
ခဏစောင့်ပါဦး...လို့(ငယ်သေးလို့)နောက် ၈ နှစ်လောက်နေရင် ဆောင်ပေးပါလို့ ပြောလိုက်မှာပေါ့
Post By : phyu lay
five star ဆိုတော်တော် ငွေတွေကုန်မှာနော် အဲ.ဒီငွေတွေ တို.ကိုပေးပါလား ယျောက်ကျားတော.မယူချင်ဘူး
Post By : myo myo
အင်း ဒီလို ဆို ရင် ကုန်ပ္ပဏီ ကို ပြောလိုက်မယ် ဗျာ..ကုန်ကျမယ့် ငွေတွေ ဘဲ ပေးပါလို့ ..ပိုက်ဆံ ယူပြီးတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုဘဲ ဆောင်တော့မယ် ဗျာ..အကုန်အကျ သက်သက်သာသာ နဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားမယ့် လက်ထက်ပွဲ မျိုးပေါ့ နော်....ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်လည်း ပိုတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ကို အိမ် လှလှလေး တစ်လုံး ၀ယ်ပြီး တူတူ နေမှာ ပေါ့ .....ကိုယ့် သိပ်ချစ်တဲ့ ကောင်မလေး နဲ့ .နှစ် ဦး တည်း ...
Post By : လူပျိုလေး..ခင်ချင်ရင်တော့ onlineking2009 ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါ ...
Post By :ိနီလာပိုင်ရှင်
အင်းကောင်းတာပေါ့ ၊ ဒါပေမဲ့ အစီအစဉ်မရှိပဲ လက်ထပ်တော့ အေးချမ်းတဲ့မိသားစုဘ၀ကို တည်ဆောက်နိုင်ပါမလား၊ သူတို.က လက်ထပ်ပေးယုံပဲလက်ထပ်ပေးမှာလေ။ နောင်ဖြစ်လာမဲ့ အကြောင်းအရာအကုန် လုံးက ဒို.နှစ်ယောက်ပဲ ဖြေရှင်းရမှာလေ ဟုတ်တယ်နော်
Post By : မောင်မောင်မမ
Post By : My name is PP
နေဦး.....သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အကုန်စုပြီးမှ မြန်မာပြည်ရဲ့ အခမ်းနားဆုံး မင်္ဂလာပွဲကြီးလုပ်ကြမယ်လေ.... (ခက်တာက ကျွန်တော်တစ်ယောက်ပဲမစွံသေးတာ)
အင်း မလိုချင်ပါဘူး ကိုယ့်ချစ်သူက သူတတ်နိုင်သလောက် ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် စုထားတဲ့ ပိုက်ဆံလေးနဲ. ထိုက်သင့်တဲ့နေရာလေးတစ်နေရာမှာပဲ ဆောင်ချင်တယ် နှစ်ယောက်ပေါင်းလို.ရတဲ့ငွေက five star မှာ ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုလည်းနှစ်ယောက်လုံး သဘောတူရင် ဆောင်မှာပေါ့ သူများက ဘာမသိညာမသိဆောင်ပေးတာတော့ လိုချင်ပါဘူး
Post By : Crystal
pat pat sat sat ko nyim lite mal.
ဒီလို..ခန်းနားစွာနှင့်..ငွေအများကြီး..ကုန်မဲ့.မင်္ဂလာဆောင်မဲ့.အစား.မရှိဆင်းရဲးသားနှင့်..ဝေဒနာရှင်..လူ နာတွေကို..ရက်ရော်စွာနှင့်လှူပစ်လိုက်မယ်..
Post By : ခင်ဦး
လက်မခံဘူး............ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ မဟုတ်လို့ 
Post By : sanditun
Post By :ျညေိငအကည
ကျင်းပပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျေးဇူးပေါ့ ဒါပေမယ့် ကုန်ကျစရိတ်တော့ မပေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောလိုက်မယ်
Post By : gispy4k
No,thanks.We will make our wedding at monastery
အဲဒီလို အကြီးအကျယ် မင်္ဂလာဆောင်ရမှာ ကြောက်နေသလိုပဲ လူသိရှင်ကြား ကိုယ့်ကိုယ်ကို မပိုင်တော့ပါဘူး မိန်းမနဲ့ ယောက္မကို ငါ့ဘ၀ကြီး အပ်လိုက်ပြီလို့ ထင်သွားမှာပေါ့ အဲဒီတော့................
Five Starဟိုတယ်ကြီးမှာလက်ထပ်ရမှမဟုတ်ပါဘူး... လက်ထပ်တယ်ဆိုတာသူနဲ့ကိုယ်နဲ့အတူတူနေကြတော့မယ်ဆိုတာကို... လူသိရှင်ကြားဖြစ်ဖို့ပဲမဟုတ်လား... အဲ့ဒီမှာကုန်မယ့်ပိုက်ဆံတွေကိုကိုယ့်ရဲ့မင်္ဂလာဦးမှာတန်ဖိုးရှိရှိအသုံးချစေချင်ပါတယ်
This is impossible.I want to impossible
ပျော်ရွှင်ကြည်းနူးခြင်းနဲ့ လွမ်းဆွတ်ခြင်းဆိုတာ နှလုံးသားကပေါက်ဖွားတာဆိုရင် ကျွန်တော့်ဘဝသစ်ထူထောင်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့ ချစ်တဲ့သူနဲ့လက်ထပ်တဲ့နေ့ဟာ နှစ်ခု စလုံးဖြစ်နိုင်တယ်...အဖေက ကလေးသုံးယောက်နဲ့လူပျိုကြီးမို့လို့ပါ..
Post By : ဝေလင်း(ကျောက်ဆည်)
Post By :်ယုန်လေး
I will be happy.... after kill him.[လူဆိုး ]
ma phyit naing tar ko ma may ne.......... ok
five star is not enough to big for my wedding. Because I want to little more.
Post By : funny
ဒါဟာ စိတ်ကူးယဉ်မှု သက်သက်ပါဘဲ၊ အခုချိန်မှာ အဲ့ဒီ့လို ကမ်းလှမ်းလာရင်တောင် ကျွန်မရဲ့ အချစ်ရဆုံးလူက လူ့ ဘ၀ထဲမှာ ရှိမနေတော့ပါဘူး။ သူနဲ့ အတူ ရှိနေစဉ် အချိန်တုံးက မဂ်လာဆောင်ကို အကြီးအကျယ်ဆောင်ဖို့ စီစဉ်ခဲ့ တာပါ။ အဲ့ဒီ့ အိမ်မက်တွေအားလုံး အခုတော့ တစစီပါဘဲ။ သေခြင်းတရား ဆိုတဲ့ သဘာဝတရားကို ကျွန်မတို့ မလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ဘူးလေ။
Post By : ဆောင်းပြည့်စုံ
Post By : myatyi
ငြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ကျွန်မက ချစ်သူနဲ့ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင်ရှာထားတဲ့ ငွေကြေးလေးနဲ့ပဲလက်ထပ်ချင်တာလေ။ five star မှာလက်ထပ်ရမှ သူကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာမှ မဟုတ်တာပဲလေ........... မဟုတ်ဘုးလားလို့ ဒါပေမယ့် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့တော့ ပြောလိုက်ပါ့မယ်.........
ဟာ ဟုတ်လား တကယ်လား အဟုတ်လား ဒါဆို ခုနလေး ရည်းစားထားလိုက်အုံးမယ် စောင့် နော် အော်...ဒါနဲ့  ဘယ်နေ့ ရက် ပေးမှာ လဲဆိုတာပြောပြ
Post By : ကောင်းမြတ်ဦး
အဲဒီလောက်ထိကံ မကောင်းနိင်ပါ ဘူး ဗျာ....တကယ်လို လာခေါ်ခဲ့ တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ချင်တယ်ဗျာ
Post By : ထွတ်ခေါင်
ma phyit naing par bu... phyit khat yin lae...................... thu( my lover) nae. pyaw pyaw kyi lat htat mhar pop.:)
5 star hotel hote lar.....ma lar tat boo....
Post By : thuzar
Post By : God of War
အဲဒီလိုမျိုးလက်ထက်ချင်ပေမဲ့ ချစ်သူမရှိ ဘူးဗျ။
Post By : သရဲ
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့သာဆိုရင် ဘယ်မှာပဲလက်ထပ် ရရ ပျော်ပါတယ်။
ပျော်မိမှာပါ ဒါပေမယ့် ဖြစ်မလာနိုင်တော့ခက်တယ် ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တစ်ယောက်တစ်ကမ္ဘာနေနေရတယ်လေ
Post By : January Girl
ှုI am very happy
Post By :့့ဂျွန်ဂျွန်
ငြင်းလိုက်ရင် အားနာစရာကြီး ကျွန်တော်တို့က မြန်မာလူမျိုးတွေ အားနာတတ်တယ်..
ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီလိုမျုိုဖြစ်လာရင်တော့လက်မခံဘူးဗျ့ ........... ၁။အနေနဲ့သာမန်လူစ်ြနေတဲ့ အတွက်ပေါ့နေရထိုရခက်မယ် ၂။အနေနဲ့အဲ့ဒီအသိုင်းအ၀ိုင်းက မျက်နှာများတော့စိက်မချရဘူး ............. အိမ်ထောင်ပြုတာ ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့ သူနဲ့အိမ်ထောင်ပြုတာပဲကောင်းပါတယ်ဗျာ။။။။
Post By : အောင်မြင်သူ
လက်မခံဘူး ..ဟန်ဆောင်အပြုံးတွေ မလိုချင်ပါဘူး ရပ်ကွက်ထဲမှာ မဏ္ဍပ်ထိုးပြီး စတုဒီသာကျွေးပစ်မယ်
Post By : မိုဃ်းဖြူ
Five Star Hotel ဆိုရင်လူတိုင်းလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ လာမယ့်သူတွေအတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေမယ်။ စတုဒီသာကျွေးတာပဲကောင်းပါတယ်
Five Star Hotel so tar Sedonar or Tradetar lar ,,,,,,,,,,,?
Post By : ......................?
ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့လက်မခံဘာဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Five Star Hotel မှာကုန်မယ့်ငွေတွေကို မရှိဆင်းရဲသားတွေကိုလှူတာကတော်တော် အကျိုးရှိပါတယ် အရာရာကို ကိုယ့်တစ်ယောက်ထဲ အတွက်စဉ်းစားတာမကောင်းပါဘူး
Yes လို့ချက်ချင်ပြောလိုက်မှာပေ့ါရှင် Five Star ဟိုတယ်ဟုတ်ရင်လဲရပါတယ်မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့အိပ်မက်ပဲလေး ချစ်သူကလပ်ထပ်ခွင့်တောင်းတဲ့အချိန်ကိ်ုမျှော်နေကြတာ
Post By : ပန်းသဇင်
ကျွန်တော်ကတော့ငြင်းလိုက်မှာပါ.. ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ်ကိုတိုင်ကြိုးစားပြီး တခမ်းတနားလက်ထပ်ချင်တာပါ...
အနစ်နာခ့ပြီးတော့ အားနာပါးနာနဲ့လက်ခံလိုက်မှာပေါ့ ........ :P
ပျော်ရွှင်စရာအကောင်းဆုံး မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုနဲ့ ချစ်သူကို အခမ်းနားဆုံး လက်ထပ်မှာပေါ့။
Post By : အေးချမ်းဇော်
five star မှာလုပ်ပေးမဲ့ပိုက်ဆံကိုတောင်းလိုက်မှာပေါ့
Post By : ROBjohn
အင်း......ကျွန်တော့် ကောင်မလေးကို မေးလိုက်မယ်..သူကျေနပ်မယ်ဆိုရင်တော့...ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံလိုက်မယ်.....။ ကျွန်တော့် အတွက် သူစိတ်ချမ်းသာဖို့ က ကအရေးကြီးတယ်လေ :P
ခမ်းခမ်းနားနား မင်္ဂလာဆောင်လိုက်ရမှ ကျေနပ်နေမယ့် လူတွေအတွက်တော့ တစ်မျိုးပေါ့... အဓိက ကနှစ်ယောက်လုံးသစ္စာရှိဖို့ပါပဲ...
Post By : အာကာ
ကျွန်မ အတွက်ကတော့ လက်ထပ်ရခြင်းထက် ကျွန်မအရမ်းတန်ဘိုးထားချစ်ခဲ့မိတဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာ ကျွန်မရှိနေ တယ်ဆိုရင်ကို ပဲ ကျေနပ်ပါပြီ..သူ့ ကိုမမျော်လင့်ရဲပါဘူး သူဘယ်သူနဲ့ ပဲလက်ထပ်ပါစေ... ကျွန်မကို ချစ်တယ်ဆိုတာကိုသိခွင့်ရရင် တော်ပါပြီ..တကယ်လို့ သူမချစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လဲ နောက်ဘ၀ မှာ သူ့ အချစ်ကိုရဖို့ ကျွန်မ ဒီဘ၀ ကတည်းကစပြီး ကြိုးစားနေမှာပါ....ူ
Post By :ူတိတ်တိတ်လေး အသည်းကွဲနေသူ
this is impossible.i thinking is only possible.
သူတို့ဆင်နွှဲပေးမဲ့မင်္ဂလာပွဲက ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့တိုင်ပင်ထားတဲ့မင်္ဂလာပွဲလောက်ပျော်ဖို့ကောင်းပါ့မလား ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ၂ ယောက်အတုတိုင်ပင်ပြိး စိတ်တူကိုယ်တူကျင်းပမဲ့ မင်္ဂလာပွဲ က သူတို့ကျင်းပပေးမယ့်မင်္ဂလာပွဲထက်ပျော်ဖို့ကောင်းမှာအမှန်ပဲ
Post By : phyumr
မဖြစ်နိုင်တာကို စိတ်ကူးယဉ်နေရင် ရင်မောရမှာပေါ့ဗျ...... သူနဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ယောက်တစ်ဘ၀ပေါင်းတဲ့ကဏ္ဍမှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခမ်းနားခြင်းတွေထက် နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ပဲ တစ်ယောက်လက်တစ်ယောက်တွဲထားချင်မိပါတယ်........ ဒါ မှားယွင်းမှုလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲလေ........
Post By : ကိုကို(တောင်ကြီး)
ပထမအနေနဲ့တော့ဝမ်းသာမိမှာပဲ။ ဒါပေမယ့်လောကကြီးမှာအလကား ရတာလွယ်လွယ်နဲ့ကျွန်မဘ၀မှာ၁ခါမှ မရှိခဲ့ဖူးဘူး။ပြီးတော့ကျွန်မအသက်၂၀ အောက်တုန်းကတော့ကျွန်မဘ၀ရဲ့ခမ်းခမ်းနားနား အရမ်းဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ကျွန်မအသက်၂၄ကျော်ပြီ။ပြီးတော့ ကျွန်မဘ၀မှာတကယ်ချစ်ရသူလည်းတွေ့ပြီ။ ဒါပေမယ့်ထူးဆန်းသွားတာကကျွန်မအခုအသက်မှာ ခမ်းနားဖို့ထက် ကျွန်မချစ်သူနဲ့သာလက်တွဲခွင့်ရဖို့ကပဲ ပိုအရေးကြီးနေမိပါတယ်။ ကျွန်မတို့၂ယောက်လက်ထပ်ခွင့်ရရင်ပဲ ကျွန်မကျေနပ်နေပါပြီ။
ဘ၀က လက်ထက်ပွဲနဲ့တင်ပြီးမှာမှ မဟုတ်တာ
Post By : piggy bank